Ihe ị ga-atụle mgbe ị na-amalite ọwa YouTube maka mmalite gị - YTpals
Ọ bụ eziokwu ama ama na YouTube bụ otu n'ime ikpo okwu a na-ejikarị eme ihe maka nkwanye vidiyo. Ikpo okwu na-eto ngwa ngwa n'ime afọ ole na ole gara aga. Mgbe na 2017, YouTube nwere ihe ruru ijeri 1.86 ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike n'ụwa niile, ọnụọgụ a karịrị Ijeri 2.3 na 2020. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi na YouTube na-enye ohere na-enye ego maka azụmaahịa ọhụrụ ịmalite ịmalite uto ha. Ohere nke YouTube nyere maka mmalite dị ọtụtụ. Ị nwere ike biputere mgbasa ozi iji dọta ndị ahịa ma ọ bụ mepụta nkuzi na otu esi eme vidiyo nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ịnwekwara ike iji YouTube nye ndị na-ekiri ha anya n'azụ ihe nkiri na azụmahịa gị.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịmalite ọwa YouTube maka azụmahịa gị, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị. Akụkọ a ga-ekpuchi isi mmalite nke ịmalite ọwa YouTube. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-enye gị ndụmọdụ maka iji YouTube nyere aka na uto azụmahịa gị.
Otu esi emepụta ọwa YouTube maka mmalite
Nke a bụ ntuziaka nzọụkwụ site na ịmepụta ọwa YouTube maka azụmahịa gị -
nzọụkwụ 1: Banye na YouTube site na iji akaụntụ Google dị adị nke azụmahịa gị ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ. Ekwesịrị ịrara akaụntụ a maka azụmahịa gị.
nzọụkwụ 2: Site na homepage na YouTube, ị nwere ike melite aha YouTube mmalite gị.
nzọụkwụ 3: Ị nwere ike dejupụta nkọwa ndị ọzọ gbasara akaụntụ azụmahịa gị.
nzọụkwụ 4: Mepụta akara ngosi ọwa ma tinye ihe osise na-anọchite anya azụmahịa gị kacha mma.
nzọụkwụ 5: Mejupụta nkọwa nke ọwa YouTube gị.
nzọụkwụ 6: Tọọ mmemme yana ọwa egosipụtara.
nzọụkwụ 7: Bulite ọdịnaya.
Ihe ndị dị mkpa ịtụle
Ọ bụ ezie na ịmepụta ọwa YouTube maka azụmahịa gị bụ usoro nzọụkwụ asaa dị mfe, enwere ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-eke ọwa YouTube gị.
1. Kpebie ihe mgbaru ọsọ gị na YouTube
Dị ka mmalite, gị YouTube chanel ga-eje ozi dị iche iche karịa ọwa YouTube ndị ọzọ. Ọ dị mkpa iji chọpụta ebumnuche nke ọwa YouTube site na mmalite. Dị ka o kwesịrị, ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ịbụ inweta ọtụtụ ụzọ maka azụmahịa gị yana ịtụgharị ụzọ iji nweta ego ndị ọzọ. Ị nwere ike ịzụlite ụzọ ndị enwetara na YouTube iji tinye ndepụta email gị. Ndepụta email a nwere ike izipu azụmahịa, wulite mmekọrịta yana kesaa ozi metụtara ụlọ ọrụ ahụ.
2. Mepụta mmefu ego maka ọwa YouTube gị
Mgbe i mechara ihe mgbaru ọsọ gị, ọ dị mkpa ịmepụta mmefu ego maka ọwa. Nke a kwesịrị ikpuchi akụrụngwa ị ga-eji mepụta vidiyo yana ma ị ga-achọ enyemaka iji gbaa ọwa. A ga-ekpebi mmefu ego gị site n'ụdị na ogo ọdịnaya ịchọrọ imepụta. Ọ bụrụ na ịchọrọ vidiyo dị elu nwere oke nrụpụta, mmefu ego maka ọwa YouTube gị ga-abawanye n'ụzọ nkịtị. Nke a bụ n'ihi na ị ga-ekenye ụfọdụ akụkụ nke mmefu ego gị maka ndị otu ndị na-ese vidiyo na ndị editọ ị ga-ewe, ma e wezụga akụrụngwa ị zụrụ.
3. Mepụta vidiyo na batches
Iji nọgide na-agbanwe agbanwe na ọwa YouTube ọhụrụ gị, ọ kacha mma ịme atụmatụ tupu oge eruo. Tupu ikesa vidiyo mbụ gị na ọwa, ọ ga-adị mma ịnwe ihe dị ka vidiyo itoolu ndị ọzọ akwadoro. Mgbe ị na-akwadebe ọdịnaya na batches nke 10, ọ ga-enye gị ohere ịrụ ọrụ nke ọma ma nyekwa gị oge ilekwasị anya n'akụkụ ndị ọzọ. Mgbe ị na-arụ ọrụ na vidiyo gị na batches, ọ ga-eme ka njem YouTube gị yie ihe siri ike.
Ịmepụta ọwa YouTube ọhụrụ maka azụmahịa gị nwere ike iyi ihe siri ike na mbụ, mana mbọ niile na-aga n'ihu ga-arụpụta nsonaazụ ya. Inweta njikọ aka achọrọ n'aka ndị na-ekiri na-abụkarị ihe siri ike maka ọwa ọhụrụ. Iji nweta nlebara anya nke ọma site na ndị na-ekiri ya, ọ dị mkpa iji melite metrik ọwa gị. Nke a bụ ebe ndị na-enye ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na-amasị YTpals nwere ike inyere gị aka. Anyị nwere ọrụ YouTube dị elu nke nwere ike inye aka itolite ọwa gị. Ị nwere ike zụta awa elekere YouTube, echiche, mmasị, na ọbụna ndị debanyere aha si YT Pals, nke na-enyere aka mee ka YouTube algọridim na-arụ ọrụ na ihu ọma gị. YTpals na-enye nkwa nchekwa 100% na ọrụ ọ bụla. Ọrụ a na-amalitekarị n'ime awa 24 ruo 72 mgbe itinye iwu. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọrụ anyị, ị nwere ike ịkpọtụrụ ọrụ ndị ahịa anyị taa!
Ihe ị ga-atụle mgbe ị na-amalite ọwa YouTube maka mmalite gị nke ndi edemede YTpals, 27 December 2021
Wzọ 3 iji bulie ndị debanyere aha YouTube na echiche site na iji Twitter - Ihe Mara
Site na ihe karịrị nde 321 ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu n'onwe ya, Twitter toro na ọnụ ọgụgụ na-eju anya na afọ ole na ole gara aga naanị. Ezie na bụla tweet nwere ike na-ejedebeghị na 280 odide na ọtụtụ,…